/ Products / prohormone / Adrenosterone vovoka
Rating: Sokajy: prohormone Tags: Adrenosterone vovoka, Adrenosterone vovoka mividy, Adrenosterone mpanondrana vovoka, Buy Adrenosterone powder
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny adrenosterone vovo (382-45-6), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Adrenosterone vovoka, koa fantatra amin'ny anarana hoe Reichstein's substance G, sy 11-keto androstenedione (11-KA4), 11-oxoandrostenedione (11-OXO), ary androst-4-ene-3,11,17-trione, dia hormone steroid mit ebreo androgenic , ary ny intermédiaire / prohormone an'ny 11-ketotestosterone.Ity no voalohany nitoka-monina tamin'ny 1936 avy amin'ny tarika adrenalin'iTadeus Reichstein tao amin'ny Pharmaceutical Institute ao amin'ny Oniversite an'i Basel. Tamin'ny voalohany, ny adrenosterone dia nantsoina hoe vaksinin'i Reichstein G. Adrenosterone dia mitranga amin'ny olona sy ny ankamaroan'ny biby mampinono ary amin'ny trondro lehibe kokoa, izay toerana voalohany amin'ny androgen, 11-ketotestosterone.
Adrenosterone poeta video
I. Adrenosterone vovoka ireo karazana fototra:
Name: Adrenosterone vovoka
Meny fitetezana 300.39
II. Adinosterona volo
MOMBA NY MISY (S): Adrenosterone vovoka
TOKONY HATRAM-BAHOAKA: 11-OXO, volo Adrenosterone, vaksinin'i Reichstein G, 11-keto androstenedione (11-KA4), 11-oxo androstenedione (11-OXO), androst-4-ene-3, 11, 17-trione
2.Adrenosterone vovoka Usage:
Ny olona rehetra izay tafiditra lalina eo amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fambolena dia mahafantatra tsara ny adinosterone ary ny mahasoa azy io rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy. Farafahakeliny 2 samirery vokatra Adrenosterone volo dia nomena ho an'ny lokan'ny fampiroboroboana ny bakteria ary ny vokatra ratsy indrindra voalaza dia mifototra amin'ny fampiasana diso na ny PCT ratsy. Patrick Arnold dia nanao zavatra betsaka mba hahazoana solitany Adrenosterone eny an-tsena ary izy no mpahay siansa simika izay nampiseho an'izao tontolo izao fa tena mahomby ny fampiasana pro-hormones amin'ny kely tsy misy fiantraikany. Izy io dia iray amin'ireo vokatra fanta-daza amin'ny ankapobeny izay tena mampisy fahasamihafana amin'ny fampihenana ny matavy mandritra ny dingam-pandeha.
3. Inona ny fatran'ny adrenosterone vovoka?
Misy karazana 3 amin'ny ankapobeny izay mety hampiasain'ny mpampiasa Adrenosterone powde (CAS 382-45-6). Misy fahasamihafana be dia be ny vokatra avoakan'ny dosage, saingy tokony hampiasaina mandritra ny fotoana kelikely kokoa ny dosage avo kokoa. Azonao atao ny mandray ny isa be indrindra amin'ny vokatra farafahakeliny, fa mila manao ny fiomanana aloha sy aorian'io mba hisorohana ny fiantraikany.
300mg amin'ny herinandro faran'ny herinandro 9
600mg amin'ny herinandro faran'ny herinandro 7
900mg amin'ny herinandro faran'ny herinandro 5
Miaraka amin'ny dosage kely 300mg, dia tsy dia misy firy loatra ny fampihenana ny volan'ny volo, saingy misy vokany amin'ny fanorenana hozatra fa tsy matavy. Ny dosia afovoany amin'ny 600mg dia mampiseho ny vokatra tsara kokoa sy ny tombo-tsoa amin'ny totalin'ny muscle amin'ny farafaharatsiny 5 pounds. Ny dosage goavam-be 900mg dia afaka mampiseho fitomboan'ny masin'ny 10 na mihoatra. Tena azo ampitahaina amin'ny vokatra hita amin'ny fiantohana matanjaka, fa kely ny vokany.
Tokony hanomboka hanova fiovana eo amin'ny sakafo mandritra ny herinandro 2 ianao alohan'ny hanombohan'ny dingana voafidy. Tsara ny maka fanafody isan'andro sy multivitaminina ary solika. Tokony hampitombo ny tsimok'aretina ianao rehefa mameno ny tsingerina. Satria ny fiovaovan'ny hormonina dia hiova rehefa atsahatra ny fampiasana ny vodin-tsindrona Adrenosterone dia ilaina ny maka vokatra fitsaboana tsara mandritra ny herinandro manaraka 4 herinandro aorian'ny famadihana. Mety tsy ilaina izany raha manao ny 6 herinandro faharetan'ny 9mg ianao, saingy ny dosage ambony dia mitaky ny fampiasana vokatra PCT tsara. Ny vokatra tsara indrindra dia mitranga rehefa manomana tsara sy mampihatra faharetana ianao amin'ny fahazoana ny vatanao ampiasaina amin'ny fanovana.
4.How adrenosterone vovoka miasa?
Rehefa mandeha araka ny tari-dalana sy ny fandidiana ny sidina nofidiana ianao dia hahita fa ny vatanao dia hampitombo ny kôrtisôla mifehy ary mankafy ny fitomboan'ny testosterone. Izany dia hitazona ihany koa ny fandanjalanjan'ny estrogen amin'ny ambaratonga izay manome fahafahana ny fahafahanao manangona ny hozatra ary mampihena ny tavy. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mahasarika ny mahavariana dia tsy vitan'ny hoe mahatonga azy io ho mora kokoa sy haingam-pandeha kokoa ny tazomoka, saingy manome famaritana tsara kokoa amin'ny zavatra noforoninao. Manome ny lalana mankany:
Mifehy ny vokatry ny kortisol;
Hamerenao ny asan'ny HPTA;
5.Benefitsin'ny vovoka Adrenosterone
Misy tombontsoa maro azo ampiasaina amin'ny vovony Adrenosterone amin'ny vokatra hafa, fa ny tena manan-danja dia ny tsy fanaovana methylated formulation dia tsy mafy amin'ny aty. Tsy mila mameno ny vatanao amin'ny vokatra ianao mba hiarovana io taova tena ilaina io. Manala ny ahiahiny izany ary mamonjy vola amin'ny vokatra fanampiny. Ny faniriana hampitombo ny hatsaran-toetra dia tsy tokony ho ny vidin'ny fahasalamanao ary ny vovobony Adrenosterone dia manampy amin'ny roa tonta.
Ny vovoka Adrenosterone dia ankasitrahana noho ny fihenan-tsakafo sy ny fihenan-tsakafo mety ho an'ny vokany. Mety amin'ny aretim-po malemy izy io ka mahatonga ny tsy fahampian-tsakafo, fa raha manao ny fiomanana tsara ianao sy ny fandaharam-potoana aorian'ny fandaharam-potoana dia mety tsy hahatsapa akory aza ianao. Mety hahatsapa fanaintainana kely miverimberina ianao rehefa avy miasa, mihabetsaka ny tosidra sy ny olana mahazo alohan'ny hatory, raha toa ianao ka mahatsiaro ho tratry ny andro. Ny fametrahana ny fotoana iakaranao ny vokatra dia toa mamaha olana amin'ny torimaso.
Tombontsoa iray hafa izay mahatonga ny adin-kanoan-tsarimihetsika malaza dia ny fahafahanao mampiasa azy io mba handinihana manokana ny tavy ary hampiasa vokatra fanampiny mba hampitombo ny haavon'ny fihenam-bidy. Mazava ho azy fa ity vokatra ity dia ampiasaina miaraka amin'ny fitambarana mihoatra ny iray. Izany no mahatonga azy io ho safidy tonga lafatra ho an'ny sehatra rehetra amin'ny fitantanana ara-batana sy ara-batana izay tadiavina. Izy io no iray amin'ireo hormones pro-hendrofendra indrindra eo amin'ny tsena.
7.Adrenosterone volo Recipes:
8.Adrenosterone vovoka Marketing:
9.Adrenosterone vovoka poera?
Raha mitady vady izay afaka manampy amin'ny fananganana ny hozatra tsara sy hanafoana ny tavy mandritra ny dingana dia azonao atao ny mandinika ny fampiasana hormone. Ny vovoka Adrenosterone dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny tsena ankehitriny. Tena mahomby sy voafetra ny vokatra hafa.
Ny volo Adrenosterone dia tsy methylated pro-hormone izay ampiasaina amin'ny mpihatsaravelatsihy sy ny mpamboly bodybuilders mba hampihenana ny tavy, fampitomboana ny hozatra sy ny muscle. Io no heverina ho iray amin'ny hormones pro-hormones ary mora kokoa noho ny ankamaroan'ny vokany. Tsy dia mafy loatra amin'ny aty mandritra ny fampiasana tsiranoka izany ary azo apetaka, na ampiasaina miaraka amin'ny fifandraisana hafa mora foana. Azo ampiasaina amin'ny pilina na ny vovo-dite. Izy io dia iray amin'ireo hormone mpampiasa kokoa, saingy ny tahan'ny fihenan-tsakafo sy ny habetsaky ny fampiasana dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo vokatra malaza indrindra any ampiasana.
III. Adinosterone vovoka HNMR
IV. Ahoana no hividianana vovo Adrenosterone avy any AASraw?
Aoka ho voalohany ny handinika ny "Adrenosterone vovoka" hanafoana ny valin-
David Tjoe on Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny -Phenylpiracet
Alex Summers on Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny -Phenylpiracet